महन्थ ठाकुर फरार भएपछि बबरमहलमा बबाल, के हो यथार्थ ? — Imandarmedia.com
महन्थ ठाकुर फरार भएपछि बबरमहलमा बबाल, के हो यथार्थ ?
काठमाडौं। महन्थ ठाकुरको पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा भित्र भाँडभैलो भएको छ। ठाकुरले आफू खुसी पार्टीभित्र मनोनयन र नियुक्तिहरू गरेपछि विरोध भएको हो।
आइतबार ठाकुरलाई भेट्न आएका नेता कार्यकर्ताले काठमाडौंको बबरमहलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा घेराउ समेत लगाएका छन्। ठाकुरविरुद्ध नारावाजी गरेका छन्।
लोसपाका अध्यक्ष ठाकुरले प्रदेश २ मा पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष तथा जिल्ला अध्यक्षहरू एकलौटी ढंगले नियुक्त गरेपछि बबाल भएको छ। अध्यक्ष ठाकुरले गरेका एकलौटी निर्णय सच्याउनुपर्ने माग असन्तुष्ट समूहको छ।
लोसपा नेपालकी नेतृ विन्दु ठाकुरले अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई पार्टीभित्र एकलौटी बनाउन खोजेको आरोप लगाएकी छिन्। असन्तुष्ट समूहका नेताहरूले भेट्न खोजेपछि अध्यक्ष ठाकुर फरार भएको आरोप पनि लगाइएको छ।
पार्टी विधान अनुसार अध्यक्षले केन्द्रिय कार्य समितिमा छलफल गरेर मात्रै नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अध्यक्ष ठाकुरले आफू निकटका नेताहरूलाई धमाधम भर्ती गरेपछि लोसपाभित्रको विवाद बाहिर आएको छ।
तेस्तै, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका सिईओ मनोजकुमार भट्टराईलाई दुई बर्ष कैद सजाय हुने सम्भावना बढेको छ। नक्कली कर्मचारी देखाएर करोडौं रकम अनियमितता गरेको पाइएपछि उनलाई उक्त सजाय हुने सम्भावना बढेको हो।
बिमा ऐन, २०४९ अनुसार यस्तो कसुर गर्नेलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा २ वर्षसम्म कैद हुनसक्ने व्यवस्था छ। बिमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बिमा समितिले अनुगमनका क्रममा,
नक्कली कर्मचारी नियुक्त गरेर ३ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै अनियमितता गरेको फेला पारेको थियो।प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सले २९ जना कर्मचारी नियुक्त गरेको भनिए पनि त्यो सबै फर्जी कागजात बनाइएर नियुक्त गरे जस्तो देखिएको छ।
बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए।उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७६/७७ मा वैदेशिक रोजगारी म्यादी जीवन बिमा व्यवसाय गर्न मार्केटिङ शाखामा कर्मचारी नियुक्त गरिएको विवरण बनाइएको छ।
अनियमितता भएको निष्कर्ष निस्किसकेको छ, को कति दाषी भन्ने कुरा बुझिरहेका छौं। कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार भट्टराईको संलग्नता रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाए पनि यसबारे विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको समितिले बताएको छ।
कम्पनीका सूचना अधिकारी चिरायु भण्डारीले भने यो विषय आजभन्दा चार वर्ष पुरानो भएको बताए। अहिले बाहिर ल्याइए पनि कम्पनीले प्रक्रिया पुर्‍याएरै कर्मचारी नियुक्ति गरिएको उनको दावी छ।
प्रक्रिया पूरा गरेर नै कर्मचारी भर्ना गरिएको हो, नियुक्ति दिएर बैंकमा तलब समेत पठाइएको छ, भण्डारीले भने, ‘चार वर्ष अगाडिको कुरा हो अहिले खै कताबाट आयो, प्रक्रिया पुर्‍याएरै काम भएको हो।